Uma ezikhulayo kwentombazanyana, uzilungiselele ukuthi kuzodingeka ukuba amthathe wezifo zabesifazane. Ungacabangi ukuthi izingane akudingeki nezinkinga Izitho zokuzala, bangakwazi zenzeka ngisho isakhasa. Ngakho, ukuhlola lokuqala luthatha ngisho esibhedlela. Ukuvakashela lokuqala kuya wezifo zabesifazane ngokuvamile uwela phezu kweminyaka eyi-1.5-3, ngesikhathi lapho ingane idlula ngihlolwa phambi engadini. Udokotela esechitha kokuxilongwa zangaphandle, ihlola ngabe labia tho, azikho ukucasuka noma ububomvu. Wabuye eyenziwa kanye phambi kwesikole - eneminyaka engu-eminyakeni 6-7.
Kodwa ukuhlolisisa ngudokotela wezifo zabesifazane ukuba kwenzeke nenkathi lapho eziqala nenkathi yokuthomba amantombazane. ngokuvamile Lokhu kwenzeka eminyakeni 12-13. Umama kumelwe aziqeqeshe kahle umntwana ukuvakasha, ungangifihleli lutho, intombazane kufanele wazi lilindelwe yini. Uma umama yena angeke yokunqoba isithiyo esibangwa ngokwengqondo futhi uchaze indodakazi yami, yini eyokwenzeka kwehhovisi likadokotela nalokho kuyadingeka, kungcono ubonane wezengqondo oqeqeshiwe.
Abanye besifazane abangamaRom babesizakala sesabe namadodakazi kudokotela, ukukhathazeka ukuthi esihlalweni esisemnyango wezifo zabesifazane zingephulwa hymen. Kodwa lokhu ezidukisayo, amantombazane uphenywa udokotela wezifo zabesifazane ngokusebenzisa le ingemuva. Yiqiniso, zikhona izimo lapho udokotela kufanele ukuqhuba luhlolo lwesitho sangasese sowesifazane, kodwa ehhovisi lakhe le njongo kukhona ekhethekile esibukweni ewumngcingo ukuthi uyosebenzisa. Udokotela yena akanandaba ilimale ukuba ingane, ngakho Iyokwenza kahle.
Futhi, ungacabangi ukuthi kuhlolisiswe ngudokotela wezifo zabesifazane nerezultativen ngokusebenzisa ingemuva, ngakho ukuthatha ingane kudokotela ngaphambi ukuqala umsebenzi wocansi akudingekile. Libuye ngempela owandile onganembile. Udokotela uzokwazi ukuhlola ubukhulu nendawo ezikhiqiza amaqanda kanye kwesibeletho, ukuminyana yayo futhi ukuhamba. Futhi, egcwele luhlolo izifo zabesifazane kuzosiza ukuqaphela ezahlukene izinhlumba, fibroids noma Izifo ukuvuvukala. Kwezinye izimo, kuphela ukwelashwa esifike ngesikhathi kungavimbela yezinkinga futhi ugweme izinkinga ezihlukahlukene nempilo yokuzalana esikhathini esizayo.
Uma indodakazi yakho ngokuthi ukulunywa, evutha, ubuhlungu, noma ocucuzayo, khona-ke inkomba ukuvakashelwa unscheduled kudokotela. Ukuhlolwa udokotela wezifo zabesifazane ngokusebenzisa ingemuva kanye kuyodingeka uma le ntombazane iqala ukuthomba ekuseni. Njengomthetho, igcwele ukwephula umjikelezo wokuya esikhathini lapho usukhulile. Kungcono siyeke ngesikhathi inqubo, okuyiwona udokotela angakunika umuthi amalungiselelo akhethekile.
Kusukela ngineminyaka engu-ukuvakashelwa 14 kuya udokotela besifazane kufanele kube njalo, kubalulekile ukuba uvakashele kwesisodwa ngonyaka. Lokhu kuzosiza ukuba sisheshe izifo ezihlukahlukene, ikakhulukazi ukwazi nokwakheka kwezitho ukugcina pathologies ezahlukene zentuthuko yabo. Examination ngumuntu wezifo zabesifazane ngokusebenzisa ingemuva - akuyona inqubo emnandi kunazo, kodwa akakwazi ngokuthi ubuhlungu. Udokotela ufaka phakathi umunwe ingquza futhi uqhuba palpation besisu, ukucacisa indawo kanye nosayizi kwezitho wahlola.
Amafinyila kwabesifazane - kuyinsakavukela pathology
Izicathulo okunesitayela amadoda abaklami Italian